ICajun Cottage endala (Le Vieux Chalet Cadien) - I-Airbnb
ICajun Cottage endala (Le Vieux Chalet Cadien)
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguJess
UJess ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Sisembindini weyona ndawo indala yesixeko sethu esincinci. Oku kulungele ngokumangalisayo, kuthi kunye neendwendwe, ukonwabela ukuhamba ukuya kwimisitho yendawo.
IYunivesithi yaseNichols State, kunye neZiko lezoNyango leNgingqi yaseThibodaux, zombini zimalunga neekhilomitha ezili-1.5 kude.
**igumbi labucala ekhayeni lethu; ligumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo**
** nokuba uthini na umhla wokubhukisha, ndifuna unxibelelwano NGOSUKU PHAMBI kokungena ukuze ndinxibelelane nawe **
**sinazo izilwanyana zasekhaya; bona ngezantsi (kunye neefoto) ngenkcazo**
Isikrini esisicaba kunye neRoku, iNetflix, iHulu, iYouTube TV, kunye neAmazon kwigumbi leendwendwe.
Ndixelelwe ukuba ikhaya lethu yayiyivenkile yelizwe elidala elibuyela emva kwiminyaka eyi-80-100, kodwa ndingaqinisekanga ngayo. Kukho imigangatho yomthi oqinileyo kuyo yonke indawo (ngaphandle kweendawo ezimanzi), iisilingi zebhodi yeentsimbi kunye neendonga, kunye netoni yomlinganiswa!
4.95 · Izimvo eziyi-46
Ngaphesheya kwesitrato yenye yezona cawa zindala kweli cala le-Mississippi, ezaqala kwiminyaka eyi-175 okanye njalo. Kwakhona phakathi komgama wokuhamba yiJean Lafitte National Historical Park kwaye kukho amasimi amaninzi, ukhenketho lwemigxobhozo, ukhenketho lwembali, kunye nezinye izinto ezizonwabisayo ngaphakathi kweyure yethu.
Umbuki zindwendwe ngu- Jess
Mna nomyeni wam sisuka apha sobabini, sizalwa kwaye sakhula. Uyazithanda umbhali-mbali wendawo kwaye uhlala ekulungele ukubuyisela nabani na ngamabali; nangona kunjalo, silapha ukulungiselela wena kunye nokulungiselela nayiphi na indlela esinokuthi ngayo, ukuba unxibelelwano oluncinci lukhetho lwakho, oko kulungile ngokugqibeleleyo.
Sipheka kakhulu ngeempelaveki. Ngelixa ingeyobhedi kunye nesidlo sakusasa, samkela nabani na ongathanda ukuzimanya nathi kwisidlo!
Mna nomyeni wam sisuka apha sobabini, sizalwa kwaye sakhula. Uyazithanda umbhali-mbali wendawo kwaye uhlala ekulungele ukubuyisela nabani na ngamabali; nangona kunjalo, silapha uku…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Thibodaux